စိတျစစေားရာ – My Blog
မောငျနဲ့ကမြ ညားခဲ့တာ ၃နှဈတငျးတငျး ပွညျ့ခဲ့ပမေယျ့ ခုထိကလေးမရသေးဘူး။ မောငျက ကလေးအရမျးလိုခငျြလို့ ဆေးပေါငျးစုံ နညျးပေါငျးစုံသုံးခဲ့ပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ ကလေးမရလို့ စိတျမကောငျးဖွဈမိပမေယျ့ ခြှငျးခကျြက မောငျ့ဘကျကဖွဈနေ တော့ ကမြလညျးဘယျတတျနိုငျပါ့မလဲလေ။ မောငျအရမျးတောငျးတတဲ့ မိသားစုဘဝလေးက ကမြတို့အတှကျ အိပျမကျတဈခုသာ ဖွဈနပေါ တော့တယျ။ မောငျကတော့ လကျမလြော့သေးပါဘူး ခုလညျး သူ့မိတျဆှေ ဆရာဝနျတဈယောကျနဲ့တှလေို့ ဆရာဝနျက နညျးလမျးတဈခု အကွံပေးခဲ့တယျတဲ့။ ဖနျဖွှနျသန်ဓသေားနဲ့လုပျရငျလညျး မောငျရဲ့သုတျရညျက မအောငျတော့ အလုပျဖွဈမှာ မဟုတျဘူးတဲ့။ အဲဒေါ့…. တဈခွားယောကျြားတဈယောကျရဲ့ သုတျရညျကို ကာမဆကျဆံတာမဟုတျဘဲ ကမြသားအိမျထဲကို ထညျ့ ပေးရငျ ဖွဈနိုငျတယျတဲ့။ မောငျ့ဘကျကသဘောတူလကျခံရငျ စိတျခယြုံကွညျရတဲ့ယောကျြားတဈယောကျကို ချေါပွီး သူ့ရဲ့ ဆေးခနျးလာခဲ့ပါ သူကူညီပေးမယျလို့ ပွောပါတယျ။ မောငျကစိတျအားတကျကွှစှာ ပွောပွနတေော့ ကမြလညျး ခေါငျးငွိမျ့ရတာ ပေါ့။ “ဒါနဲ့ မောငျ ဘယျသူ့ကိုချေါသှားမှာလဲဟငျ” “ယုံကွညျရမယျ့သူရော ရှိလို့လား” လို့မေးတော့ မောငျက…
“မောငျလညျးအဲ့ဒါ စဉျးစားနတော၊ မြိုးရိုးကောငျးတဲ့သူ လညျးဖွဈစခေငျြတယျ၊ မောငျရဲ့မိတျဆှေ ဆရာဝနျကိုပဲ ထပျပွီး အကူညီ တောငျးရတာပေါ့ကှာ” “အငျးပါ မောငျရယျ..၊ ကလေးရလာရငျရော မောငျ့ရဲ့ သှေးသားအရငျးလို ခဈြနိုငျပါ့မလား မောငျက” “ခဈြ မှာပေါ့.. မောငျကိုယျတိုငျလိုခငျြလို့ စီစဉျထားတာပဲ” ဒါမဲ့ ကမြစိတျထဲမှာ သိပျပွီးအလိုမကခြငျြဘူး။ ကိုယျ့ယောကျြားမဟုတျဘဲ တဈခွားသူရဲ့ရငျသှေးကို လှယျပွီးမှေးရမှာ ဆိုတော့ စိတျထဲမခငျြ့မရဲနဲ့ သစ်စာဖောကျသလိုမြား ဖွဈနမေလားတှေးပွီး စိုးရိမျမိတယျ။ ကမြမောငျ့ကို မော့ကွညျ့တော့ မြှျောလငျ့ခကျြရောငျခွညျ သနျးနတေဲ့ မကျြဝနျးတနေဲ့ ပွုံးနတောတှရေ့တယျ။ “မောငျ..” “ဟငျ..ပွောလေ ခဈြ..” “ခဈြ မောငျ့ကိုသစ်စာဖောကျသလို ဖွဈနမှောစိုးတယျ” တိုးတိတျညငျသာတဲ့ အသံလေးနဲ့ပွောပွီး ကမြ မောငျ့ကို တငျးကပျြစှာ ဖကျထားလိုကျမိတယျ။
မောငျကလညျး ကမြကိုယျလေးကို သိုငျးဖကျလို့ နဖူးလေးကို ဖှဖှလေး ငုံ့နမျးလာတယျ။ “အာ့တော့ မစိုးရိမျပါနဲ့၊ မောငျ့ခဈြဇနီးလှလှ လေးကို တဈခွားသူ လကျဖြားနဲ့ထိတာတောငျ မခံနိုငျပါဘူး၊ ဒါကလညျး အထိအတှနေဲ့ဆကျဆံတာမှ မဟုတျဘဲ၊ အရညျကိုဆေး ထိုးပိုကျထဲထညျ့ပွီး ခဈြ သားအိမျထဲ ကိုသှငျးရုံပါကှာ” “အငျးပါ၊ မောငျကခဈြကို အခဈြပေါ့သှားမှာစိုးလို့ပါ” အခဈြတှကေ တိုးပွီး တောငျလာမှာပါကှာဆိုးပွီး ကမြနှုတျခမျးတှကေို အငမျးမရနမျးလိုကျတယျ။ ကမြလညျး မောငျ့ခါးကို ပိုတငျးပွီးဖကျလိုကျတော့ မောငျ့ရဲ့လီးကွီးကထောငျလို့ ဆီးခုံကိုလာထောကျနတေော့တာပေါ့။ နှဈယောကျသား ပှဖေ့ကျနမျးရှုံ့ရငျးနဲ့ ကာမစိတျတှကေလညျး တကျလာ အိမျမှာကလညျး နှဈယောကျတညျးနတော ဆိုတော့ ဧညျ့ခနျးထဲက စားပှဲပျေါမှာပဲ ကမြလကျနှဈဖကျကိုထောကျပွီး ခွေ နှဈခြောငျးကိုကားလို့ ဖငျလေးကိုကော့ထားပေးလိုကျတယျ၊ မောငျကလညျး ကမြလုံခညျြကို ခြှတျခလြို့ စှနျ့ကားနတေဲ့ ဖငျနှဈခွမျး အောကျမှာ ပွူထှကျနတေဲ့ ကမြအဖုတျလေးထဲကို သူ့လီးကွီးကိုအဆုံးထိထညျ့ပွီး နောကျကနေ စောငျ့စောငျ့လိုးပေးတော့တာ ပေါ့..။
ကမြဖငျသားတှနေဲ့ မောငျ့ရဲ့ပေါငျတှနေဲ့ရိုကျတဲ့အသံကလညျး တဖကျဖကျနဲ့ စညျးခကျြကိုညီလို့။ “ဖကျဖကျ..ဖကျဖကျ” “အ ဟငျ့..ဟငျ့” “အား…” “အား..ကောငျးလိုကျတာ၊ ခဈြအဖုတျလေးကအရမျး လိုးလို့ကောငျးတာပဲ” “ခဈြ အဖုတျကမောငျ တဈယောကျတညျးအတှကျပါပဲ မောငျ စိတျကွိုကျလိုးပေါ့လို့” ကမြလညျး ညညျးငွူသံလေးနဲ့ စကားတှတေတှတျတှတျ ပွောပွီး ဖငျကိုတဈခကျြတဈခကျြ ကော့ကော့ထိုးပေးပွီး ခံနမေိတယျ။ နာရီဝကျလောကျကွာတော့ ပွီးသှားတယျ။ နှဈယောကျအတူ ရခြေိုးခနျးထဲဝငျပွီး ရခြေိုးကွရငျးနဲ့ တဈခြီ ဆကျလိုးဖွဈကွပါသေးတယျ။ နောကျတဈနမေ့နကျရောကျတော့ မောငျနဲ့ကမြ သူ့ မိတျဆှဆေရာဝနျဆီ ကားနဲ့သှားကွတယျ။ ဟိုရောကျတော့ ဆေးခနျးမှာလညျး လူတှရှေုပျလို့ ညနမှေအေးဆေး ပွနျလာခဲ့ပါပွော တာနဲ့ အိမျကိုပဲမောငျးပွီး ပွနျလာရတယျ၊ ညနေ ၃နာရီခှဲလောကျရောကျတော့ ဆရာဝနျကမောငျ့ဆီကို ဖုနျးဆကျလာတယျ၊ လာခဲ့ တော့တဲ့၊ မောငျကလညျး ဖုနျးထဲမှာပဲ တဈခွားလူရှာဖို့ အဆငျမပွကွေောငျးနဲ့ ဆရာပဲအစဆုံးကူညီပေးဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတယျ။ လူရငျးတှဆေိုတော့ ဆရာဝနျကလညျးကူညီပါ့မယျဆိုတာနဲ့ ကမြတို့ ဆေးခနျးကို တဈခေါကျထှကျလာခဲ့ပွနျတယျ။
ဆေးခနျးရောကျတော့ ဆရာဝနျကအသငျ့စောငျ့ကွိုနတေယျ။ ပွီး သူ့ရုံးခနျးထဲချေါပွီး အကြိုးကွောငျးအကုနျရှငျးပွတယျ။ သုတျ ရညျကို ၃ရကျလောကျဆကျတိုကျထညျ့မှ စိတျခြ နိုငျမှာဖွဈကွောငျး၊ အရညျကိုလညျးပူပူနှေးနှေးမခွောကျခငျထညျ့ရမှာမို့ ရောကျလာမှပဲထုတျရမှာဖွဈကွောငျး ပွော ပွတယျ။ “ဒီလောကျဆိုနားလညျပီမလား၊ ကနြျောလညျးတဈခါမှ ခုလိုမကူညီပေးခဲ့ဖူး ဘူး၊ မိတျဆှရေငျးမို့ပါဗြာ” မောငျကလညျး ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောပွီး ဆရာအဆငျသငျ့ဖွဈရငျ စရအောငျပွောတော့ ဆရာဝနျက ခနနျော အိမျသာထဲဝငျလိုကျအုံးမယျဆိုပွီး ထထှကျသှားတယျ။ ကမြတို့ ရုံးခနျးလေးထဲမှာပဲ စောငျ့နလေိုကျတယျ။ အိမျသာ ထဲ ဘာလို့သှားလဲဆိုတာ ကမြစိတျထဲသိပါတယျ၊ သူ့လရညျတှေ ထှကျအောငျ ဂှငျးသှားထုဖို့ဆိုတာ ပွီးရငျ သူ့လရညျတှကေို ဆေး ထိုးပိုကျနဲ့ ကမြအဖုတျထဲ ထိုးထညျ့တော့မှာကို တှေးမိတော့ မလုံမလဲနဲ့ မောငျ့ရှမှေ့ာ ရှကျပွီး ခေါငျးကိုငုံ့ထားရတယျ။
ခနအကွာမှာတော့ အိတျလေးတဈခုကိုငျပွီး ဆရာဝနျ ရုံးခနျးထဲကိုဝငျလာတယျ။ “ကဲ…ရပွီ၊ ခငျဗြားမိနျးမကို အပွငျကကုတငျမှာ လှဲခိုငျးလိုကျပါ” “ဟုတျ..ဆရာ” မောငျကကမြလကျကိုဆှဲချေါပွီး ကုတငျပျေါလှဲခိုငျးလိုကျတယျ၊ ကမြလညျးမယောငျမလညျနဲ့ လှဲအိပျနလေိုကျရတာပေါ့၊ ဆရာဝနျက ခုနယူလာတဲ့ အိတျထဲကအရညျဖွူဖွူတှကေို အပျမပါတဲ့ဆေးထိုးပိုကျနဲ့ ကုနျတဲ့ထိစုပျယူနေ တယျ၊ပွီးတော့ ကမြရဲ့ဒူးနှဈဖကျကို ထောငျခိုငျးတယျ၊ ဆရာဝနျက အပျကွီးမွှောကျမွှောကျပွီး ကုတငျပျေါဘေးတစောငျးထိုငျ နရောယူပွီး ဘာမှရှကျမနဖေို့နဲ့ အတှငျးခံလညျးခြှတျလိုကျပါအုံးလို့ ပွောလာတယျ၊ မောငျကတော့ ကမြဘေးနားမှာ ဘာမှမဖွဈ သလိုရပျကွညျ့နလေရေဲ့၊ ကမြဖွငျ့ရှကျလှနျးလို့ မကျြလုံးစုံမှိတျပွီး မောငျ့လကျကိုစုပျကိုငျထားလိုကျမိတယျ၊ ဟုတျတယျလေ ကိုယျ မသိတဲ့ယောကျြားတဈယောကျရှမှေ့ာ အတှငျးခံခြှတျပွီးတောငျ ပွရတော့မှာဆိုတော့ ၊ ဒါမဲ့…မောငျအရမျးလိုခငျြတဲ့ မိသားစုဘဝ လေးကိုတော့ ဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြမိတယျ၊ ဒါနဲ့ရှကျရှကျနဲ့ပဲ အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ပေါငျလယျလောကျထိခြှတျပေးလိုကျတယျ၊
ဆရာဝနျရဲ့လကျတဈဖကျက ဆေးထိုးပိုကျကိုကိုငျလို့ တဈဖကျက ကမြဒူးကိုကိုငျပွီး ဖိဖွဲခလြိုကျတယျ၊ ပွီးမှဆေးထိုးအပျတံအရငျး ထိရောကျအောငျ ကမြအဖုတျထဲကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးထိုးခလြိုကျတာ အေးစကျစကျမာတောငျ့တောငျ့ကွီးဆိုတော့ နညျးနညျးနာသှား တာပေါ့၊ အပျထဲကအရညျတှေ ထိုးခလြိုကျတော့မှ အဖုတျထဲမှာ ပူနှေးနှေးကွီးနဲ့ ဆရာဝနျရဲ့လရညျတှကေ လြောခနဲကမြသားအိမျ ထဲကို ဝငျသှားပါတော့တယျ။ ပွီးတာနဲ့ အတှငျးခံကိုပွနျဝတျ လုံခညျြကိုပွနျဖုံးလို့ ခကျြခွငျးထထိုငျလိုကျတယျ၊ ဆရာဝနျရဲ့မကျြနှာကို မကွညျ့ရဲတော့ဘူး၊ ရှကျလှနျးလို့မကျြနှာကိုနီရဲနတောပဲ။ “ကဲ..စိတျခရြအောငျ နောကျနှဈရကျတော့ဆကျတိုကျ လာခဲ့အုံးနျော” “ဟုတျ” ကမြတို့လညျး ဆရာဝနျကိုနှုတျဆကျပွီး ပွနျလာခဲ့ကွတယျ။ နောကျညနမှောလညျး ဆရာဝနျမှာတဲ့အတိုငျး မောငျနဲ့ကမြ ထပျလာခဲ့ကွတယျ၊ အရငျနကေ့လိုပဲ ဆရာဝနျကအိမျသာထဲဝငျသှားပွနျတာပေါ့၊ အဲ့ခြိနျမှာပဲ မောငျ့ဆီဖုနျးဝငျလာလို့ အပွငျထှကျ ပွီးဖုနျးသှားပွောတယျ၊ ခနနပွေနျရောကျလာပွီး မောငျ့အလုပျရှငျက အရေးကွီးလို့လာခဲ့ပါအုံးတဲ့ ခနနပွေနျလာခဲ့မယျဆိုပွီး ထှကျ သှားပါတော့တယျ။ ကမြလညျး တဈယောကျတညျးဆကျစောငျ့နရေငျးနဲ့ ဆရာဝနျက နာရီဝကျလောကျကွာမှ ထှကျလာတယျ။
ကမြတဈယောကျတညျး ထိုငျနတောမွငျတော့ မကျြမှောကျကြုံ့သှားပွီး “မငျးယောကျြားရော”တဲ့ “သူ့အလုပျပွနျသှားတယျ၊ ခနနေ ပွနျလာမယျတဲ့” “ရပွီလား…ဆရာ” မေးလိုကျတော့ သကျပွငျးတဈခကျြခလြို့ မောဟိုကျနတေဲ့လသေံနဲ့ ပွနျဖွရှောတယျ ။ “ပွော ရမှာတော့ အားနာတယျဗြာ၊ နလေ့ယျက မိနျးမနဲ့ရနျဖွဈတော့ စိတျညဈနလေို့ လုံးဝမထှကျဘူး ဖွဈနတေယျဗြာ” “ဟငျ..ဒါဆို ဘယျလိုလုပျမလဲ၊ ပွနျရတော့မှာပေါ့” “ဒီလိုလုပျပါ့လား၊ တဈမြိုးတော့မထငျပါနဲ့၊ ညီမဟာလညျးမွငျဖူးပွီးသားဆိုတော့ မနကေ့လို ပဲ ခြှတျပွီး ထောငျပွထားပေးပါ့လား” “ဆရာကွညျ့ပွီးထုမယျဆို ထှကျလောကျမှာပါ” ကမြလညျး စဉျးစားမိတယျ၊ နှဈယောကျ တညျးဖွဈမှဖွဈပါ့မလားလို့ပေါ့၊ ဒါမယျ့..ဒီနအေ့လုပျမဖွဈရငျ နောကျတဈရကျထပျတိုးပွီးလာရမှာ စိုးတာနဲ့ ဆရာဝနျပွောသလို လကျခံလိုကျတော့တယျ။ ကမြ ကုတငျပျေါတတျ လုံခညျြလှနျပွီး အတှငျးခံခြှတျခပြေးလိုကျတယျ၊ မထူးပါဘူးဆိုပွီး မွနျမွနျပွီး သှားရအောငျ ဒူးနှဈဖကျပါထောငျပွီး ကားထားပေးလိုကျတယျ။
ဆရာဝနျလညျး ကုတငျပျေါတကျလာပွီး ကမြခွရေငျးမှာ ဒူးထောကျထိုငျခပြွီး ပုဆိုးလှနျကာ ပွဲအာနတေဲ့ ကမြအဖုတျကိုကွညျ့လို့ တအငျးအငျးနဲ့ ဂှငျးထုနပေါတော့တယျ။ ကမြအဖုတျကိုကွညျ့ရငျး တအငျးအငျးနဲ့ထုနတေဲ့အသံကွားတော့ ကမြစိတျထဲ မရိုးမရှ ဖွဈလာရတာပေါ့၊ အဖုတျအတှငျးသားတှပေါ ယားလာပွီး အရညျတောငျစို့လာနသေလိုပါပဲ၊ ဆရာဝနျလညျး အရှိနျရလာလို့ထငျပါရဲ့ ကမြဒူးတဈဖကျကိုတှနျးကိုငျလို့ ရှကေို့ကုနျးပွီး ထုလာတယျ။ နောကျတော့ သူ့လကျက ဒူးပျေါကနေ ကမြပေါငျသားတှဆေီ မသိမသာ ပှတျသပျလာတယျ၊ ကမြလညျးမသိသလိုနလေိုကျမိတယျ၊ ကမြမှာ တဈစိမျးယောကျြားတဈယောကျရဲ့ ပေါငျရငျးထိပှတျ သပျလာတဲ့ အထိတှကွေ့ောငျ့ ရှကျရှကျနဲ့ပဲ မသိစိတျထဲက ကာမစိတျတှထေလာမိတယျရှငျ။ “ညီမ” “ရှငျ” လှိုကျဖိုနတေဲ့အသံနဲ့ ကမြပွနျထူးမိတယျ။ “ညီမအဖုတျလေးကိုကွညျ့ပွီး လုပျခငျြလာပွီကှာ အဓိက ညီမအဖုတျထဲဆရာ့လရညျတှေ ဝငျဖို့ပဲလေ” “ဆေးထိုးပိုကျမလိုတော့ပါဘူး ဆရာ့ဟာကွီးကိုယျတိုငျပဲ ညီမအဖုတျလေးထဲသှငျးပွီး လရညျတှေ ထုတျပေးတော့မယျနျော” “ဟငျ..မောငျပွနျလာရငျ သလေိမျ့မယျ” “မလာနိုငျသေးပါဘူးကှာ” ဆိုပွီး ထောငျမတျနတေဲ့ သူ့လီးတုတျတုတျကွီးကို ကမြအဖုတျ ပျေါ လာထောကျထားတော့တယျ။ ကမြလညျး စိတျရဲ့စရောအတိုငျး မငွငျးမိဘူး။
ကမြဆီက အသံမကွားရတော့ ကမြအဖုတျလေးကိုဖွဲပွီး နီရဲနတေဲ့ သူ့လီးဒဈကွီးကို ထိုးစိုကျခလြိုကျတယျ၊ သူ့ဒဈကွီးက ကား ကားကွီးနဲ့အကွီးရီးဆိုတော့ အဖုတျဝမှာ ဝငျတယျဆိုရငျပဲ ကမြမှာ အသကျအောငျ့လို့ “အငျး”ကနဲ ခါးကော့ခေါငျးမော့ သှားပွီး လကျနှဈဖကျက အိပျရာခငျးစကို သတိလကျလှတျ ဆှဲခစြေုပျကိုငျထားမိတယျ။ “အားးး..ဆရာ နာတယျ..” ရှုံ့မဲ့မဲ့မကျြနှာလေးဖွငျ့ အသနားခံသလို ညုသလိုအသံလေးနဲ့ပွောလာတော့ ကနြျောလညျး စိတျတှပေိုထလာပွီး လီးကိုအဆုံးထိ ထိုးခပြဈလိုကျတယျ။ “အားးးးသပေါပီ” “နောကျတော့ ဆရာဟာကွီးကို ကွိုကျသှားမှာပါကှာ”လို့ ပွောပွီး သူငယျခငျြးမိတျဆှရေဲ့ ဇနီးလှလှလေးကို စိတျရှိလကျရှိ စောငျ့လိုးနလေိုကျပါတော့တယျ။ ကမြမှာ အသကျအောငျ့လို့ “အငျး”ကနဲ ခါးကော့ခေါငျးမော့ သှားပွီး လကျနှဈဖကျ က အိပျရာခငျးစကို သတိလကျလှတျ ဆှဲခစြေုပျကိုငျထားမိတယျ။ “အားးး..ဆရာ နာတယျ..” ရှုံ့မဲ့မဲ့မကျြနှာလေးဖွငျ့ အသနားခံ သလို ညုသလိုအသံလေးနဲ့ပွောလာတော့ ကနြျောလညျး စိတျတှပေိုထလာပွီး လီးကိုအဆုံးထိ ထိုးခပြဈလိုကျတယျ။ “အားးးးသေ ပါပီ” “နောကျတော့ ဆရာဟာကွီးကို ကွိုကျသှားမှာပါကှာ”လို့ ပွောပွီး သူငယျခငျြးမိတျဆှရေဲ့ ဇနီးလှလှလေးကို စိတျရှိ လကျရှိ စောငျ့လိုးနလေိုကျပါတော့တယျ။
သူ့ဆေးခနျးက ကုတငျလေးကလှုပျလီလှုပျလဲ့နဲ့ ကမြအပျေါကနေ စောငျ့လိုးနလေိုကျတာ တကြှီကြှီနဲ့ ယိမျးထိုးနတေော့တာပဲ၊ ခုလိုး နတေဲ့လူက ကမြယောကျြားမဟုတျပမေယျ့ အဖုတျထဲကို ပွညျ့သိပျပွီးဝငျဝငျလာတဲ့ သူ့လီးကွီးကွောငျ့ ကမြရဲ့ပေါငျနှဈခြောငျးကို အစှမျးကုနျကားထားပေးမိတယျ။ မောငျပွနျလာရငျဆိုတဲ့ စိုးရိမျစိတျကလညျး ရှိသေးတာမို့ အရမျးကောငျးနပေမေယျ့ မွနျမွနျပွီး စခေငျြနရေတာပေါ့။ “ဆရာရယျ..မွနျမွနျပွီးလိုကျပါတော့” “အငျးးးး ပွီးတော့မှာပါ..အားးးကောငျးလိုကျတာညီမရယျ၊ ညီမ အဖုတျလေးကစီးပိုငျနတေော့ ဆရာ့လီးကွီးထုတျ တောငျမထုတျခငျြတော့ဘူး” “ဟငျ..မထုတျလို့တော့ဘယျရမလဲ၊ သူမြားမယား ကို” ကမြလညျး ဟနျဆောငျပွီးပွောနပေမေယျ့ စိတျထဲကသူ့လီးကွီးကို ကမြအဖုတျထဲစိမျပွီး ညှဈထားပေးခငျြသေးတာပေါ့။
အရမျးကောငျးနတေဲ့ သူမမကျြနှာလေးကွညျ့ပွီး အကွာကွီး ဇိမျစှဲလိုးခငျြသေးပမေယျ့ သူမယောကျြားပွနျလာရငျ ကောငျးခနျး ရောကျမှ မီးပကျြဆိုသလိုဖွဈမှာဆိုးတာနဲ့ပဲ ကနြျောလညျး မွနျမွနျလေးစောငျ့လိုးပေးပွီး သူမအဖုတျထဲကို ကနြေျာ့လရညျတှေ အဆကျမပွတျ ပနျးထုတျပေးလိုကျတော့တယျ။ “ကဲ..ညီမလိုခငျြတဲ့ ဆရာ့လရညျတှေ ညီမအဖုတျထဲကို ထညျ့ပေးလိုကျပွီနျော” “ဟာ…ဆရာကလဲ” ပွီးလညျးပွီးသှားရော ကမြမကျြနှာတဈလုံး နီရဲနတောပါပဲ၊ သူ့လရညျတှေ ပကြေံနတေဲ့ ကမြအဖုတျတဈဝိုကျ ကိုလညျး တဈရှူးစနဲ့သုတျပေးလိုကျသေးတယျ၊ ပွီးမှ အဝတျအစားတှပွေနျဝတျ ရုံးခနျးထဲမှာ မောငျ့ကိုထိုငျစောငျ့နလေိုကျကွ တယျ၊ နှဈယောကျတညျးအခနျးလေးထဲမှာ အနရေခကျလာတာနဲ့ မောငျ့ဆီဖုနျးဆကျပွီး Taxiငှားပွီးပွနျလိုကျတော့မယျ၊ မောငျအား တဲ့နမှေ့ ပွနျလာရအောငျပွောပွီး ဖုနျးခလြိုကျတယျ၊ မောငျသဘောတူထားပမေယျ့ မောငျ့နောကျကှယျမှာ အခုလိုမြိုး ကိုယျထိ လကျရောကျ ဆကျဆံမိခဲ့သှားတာက ကမြရဲ့ အပွဈတဈခုလိုခံစားရပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့ နောငျအရှုပျအရှငျးမရှိရလအေောငျ ဆရာဝနျကို ကတိတောငျးရတယျ။
“ဆရာ..ဆရာဝနျတဈယောကျရဲ့ဂုဏျနဲ့ ကမြတို့သိက်ခာကို ထောကျပွီး ဒီကိစ်စကို ဒီမှာပဲထားပေးပါ၊ ကလေးရလာရငျလညျး ဘာမှမ ဆိုငျသလိုနပေါမယျလို့ ကတိပေးပါ ဆရာ” “ပေးပါတယျ၊ ဆေးပညာအရ အကူညီပေးခဲ့တယျလို့ပဲ သဘောထားလိုကျပါ့မယျ၊ ညီမ ဘာမှစိတျမပူပါနဲ့ကှယျ” “ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆရာ” ကမြလညျး ဆရာ့ကိုနူတျဆကျပွီး ပွနျလာခဲ့လိုကျတယျ။ အိမျရောကျတော့ မောငျပွနျမရောကျသေးဘူး၊ ကမြတဈယောကျတညျး ဆရာဝနျနဲ့ကြူးလှနျမိတဲ့ အဖွဈကိုပွနျတှေးပွီး နောကျနတှေ့သှေားရ မှာ မဝံ့မရဲဖွဈမိပါတယျ၊ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈလေ ရလာတဲ့ကိုယျဝနျက ဆရာဝနျရဲ့ကိုယျဝနျပဲ ဖွဈမှာပါလဆေိုပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဖွသေိမျ့ရငျး အဝတျစားလဲ ရခြေိုးပွီး မောငျ့ကိုစောငျ့နလေိုကျတယျ၊ ၆နာရီထိုးလောကျတော့ မောငျပွနျလာတယျ၊ ကမြလညျး ဒီနေ့ အလုပျမဖွဈကွောငျး လိမျညာပွီးပွောလိုကျတော့ မောငျကနောကျရကျတှေ ထပျသှားတာပေါ့တဲ့၊ ကမြ မောငျမသိအောငျ သကျ ပွငျးတဈခကျြခိုးခလြိုကျမိပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ နောကျရကျတှေ မောငျနဲ့ကမြနှဈယောကျတူပဲ သှားဖွဈကွတယျ၊ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ မောငျ့ရဲ့ကိုယျဝနျရရှိရေးစီမံကိနျး ကွီး ပွီးသှားပါတော့တယျ။ တဈပတျလောကျကွာတော့ မောငျ့မိတျဆှဆေရာဝနျ ကမြတို့အိမျကို ရံဖနျရံခါရောကျရောကျလာတတျ တယျ၊ အစတော့ ရိုးရိုးသားသားအလညျလာတယျထငျခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျး ကမြအပျေါကွညျ့တဲ့မကျြလုံးတှကေ မရိုးသားဘူးဆို တာ သတိထားမိလာတော့ စိတျထဲတဈမြိုးဖွဈလာတယျ၊ သူနဲ့တဈခါလိုးခဲ့ဖူးတယျဆိုတဲ့ အသိကလညျး ကမြရဲ့ကာမစိတျတှေ ကွှလာစတောပေါ့၊ သုံးယောကျသားစကားပွောနရေငျး တဈခါတဈခါ ကမြသူ့ကို မခို့တရို့မကျြစောငျးထိုးထိုးပွီး ကွညျ့မိတယျ၊ သူ ကလညျး ကမြယောကျြားကှယျရာဆို မထိတထိစကားတှေ ပွောတတျလာတယျ၊ တဈခါကဆို ဆရာဝနျလငျမယားနှဈယောကျလုံး ကို မောငျက ထမငျးဖိတျကြှေးတော့ ထမငျးစားခနျးထဲမှာ မောငျနဲ့ကမြကတဈဖကျ ကမြနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာ ဆရာဝနျကထိုငျလို့ သူ့ မိနျးမကဘေးမှာထိုငျစားဖွဈကွတယျ၊ ကမြက ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို စားပှဲအောကျတနျးပျေါတငျပွီးစားနရေငျး ခွဖြေားထိပျကို တဈခုခုထိသလိုဖွဈလို့ မော့ကွညျ့တော့ ဆရာကမသိလို ကမြကိုပွနျကွညျ့တယျ၊ ကမြလညျး ခေါငျးငုံ့ပွီး ထမငျးဆကျစားနလေိုကျ တယျ၊ နောကျတဈခါကြ ကမြခွဖေမိုးပျေါ လာဖိထားတယျ၊ ဆရာလုပျနတောသိလို့ ကမြဘာမှမဖွဈသလို ငွိမျနလေိုကျတော့ ခွသေလုံးတှထေိပါပှတျလာတယျ၊ နောကျပိုငျးအားမရတော့ သူ့ခွနှေဈခြောငျးနဲ့ညှပျပွီး ဆှဲခလြိုကျတာ ကမြခွနှေဈခြောငျးက စားပှဲ အောကျဆနျ့ဆနျ့ကွီး ဖွဈသှားတာပေါ့၊ ကမြလုံခညျြအောကျကနေ သူ့ခွထေောကျတှေ ပေါငျရငျးထိထိုးတကျလာတော့ ကမြလညျး စားပှဲရှကေို့ မသိမသာတိုးကပျလိုကျတယျ၊
ပွီးတော့ ကမြရဲ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီပျေါကနေ သူ့ခွမေကွီးနဲ့ အဖုတျကို ထိုးကလိပေးနတော ထမငျးစားမပကျြဟနျမပကျြပါပဲ ထပွောလို့လညျးမကောငျး ဖွဈနတေော့ သူကလိနသေမြှ ဟနျမပကျြထမငျးဆကျစားနလေိုကျတယျ၊ အဖုတျလညျးအရညျတှရှေဲလို့ ထမငျးစားပွီး ဆရာဝနျလငျမယားပွနျသှားတာတောငျ ကမြမှာ လှိုကျဖိုကနျြခဲ့ရတယျ၊ ည မောငျနဲ့လွိုး ဖဈကွတော့ မောငျက ကမြခွနှေဈခြောငျးကို ပုခုံးပျေါတငျပွီး ဖငျထောငျလိုးတာ ကမြဖွငျ့ကောငျးလှနျးလို့ တဈခကျြတဈခကျြဆို ဆရာဝနျမကျြနှာကို ရောငျရမျးပွီး မွငျယောငျမိသေးတာပေါ့ရှငျ။ ကမြတို့ ထမငျးဖိတျကြှေးပွီးတဲ့နောကျပိုငျး ကမြတို့အိမျကို အလညျလာနကြေ ဆရာဝနျ ပြောကျခကျြသားကောငျးနခေဲ့တယျ၊ မောငျ့ကိုတော့ မမေးကွညျ့မိပါဘူး၊ တျောကွာတဈမြိုးထငျသှားမှာဆိုးရတယျလေ၊ ကမြမသိစိတျကပဲ တိတျတခိုး မြှျောနမေိတာပါ၊ တဈခါပတျသကျခဲ့ဖူးတယျဆိုပမေဲ့ ဆေးပညာအရ ပတျသကျခဲ့တာဆိုတော့ လိပျပွာမလုံတော့ မဖွဈပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ဆရာဝနျဘကျက နောကျပိုငျးကမြအပျေါပွောငျးလဲဆကျဆံလာမှုတှအေပျေါတော့ သာယာသလိုလိုနဲ့ နောကျတဈကွိမျ ထပျပွီး ကမြအဖုတျလေးထဲ သူ့လီးတုတျတုတျကွီးနဲ့ အားရပါးရ လိုးပေးမှာကို မဝံ့မရဲ မြှျောလငျ့နမေိတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ တဈလလောကျအကွာမှာတော့ ဆရာဝနျ ကမြတို့အိမျကို ရောကျလာပါတယျ၊ သူရောကျလာတော့ မောငျကမရှိဘူး၊ ကမြ တဈယောကျတညျးရှိတဲ့ခြိနျမှ ဆိုကျဆိုကျမွုကျမွုကျ ရောကျခလြာတာ၊ တမငျလာတာလား.. မသိလို့လာတာလား မပွောတတျဘူး၊ ဒါနဲ့ ကမြလညျး မောငျပွနျမလာသေးဘူး..ဘာကိစ်စရှိလို့လဲလို့ မကျြနှာတမငျတညျပွီး မေးလိုကျတော့… နယျဘကျရောကျနတေဲ့ တှကျ မလာဖွဈတာကွာလို့ ဝငျလာတာဖွဈကွောငျး၊ နောကျပွီးကမြကိုယျဝနျရမရ သခြောအောငျ စဈပေးမလို့ လာတာ ဖွဈကွောငျး ပွောပွတယျ။ “မသခြောရငျရော ဘယျလိုလုပျရမှာလဲဆရာ” ကမြအတှနျ့တကျပွီး မေးလိုကျတော့ ဆရာတဈ ယောကျလုံးရှိတာပဲ ထပျပွီးလုပျပေးမှာပေါ့တဲ့… “ဟှနျ့… လူလညျကွီး” ဆိုပွီး ကမြနုတျခမျးလေးစူ မကျြ စောငျးလေးထိုးပွီး ကလေးတဈယောကျဆိုးနှဲ့သလိုပုံစံမြိုးနဲ့ မကျြနှာကလေးစူပုပျလို့နလေိုကျတယျ၊ ကမြတမငျသကျသကျ ရလောမွောငျးပေးလုပျပွ နတောပါ၊ ကမြရဲ့ကာမဆန်ဒတှေ ဆရာဝနျဆီ ပုံခပြေးခငျြနမေိပါပွီ။
“လူလညျကွီး မဟုတျပါဘူးကှာ.. ညီမဟာလေးက တဈခါတညျးနဲ့ တဈသကျစှဲအောငျ ကောငျးတာကိုး” “ဟငျ…တကယျပေါ့” ကြ မလညျး မခို့တရို့မကျြနှာလေးနဲ့ ပွနျမေးလိုကျတယျ။ “အငျးပေါ့၊ ညီမ… ညီမကိုဆရာအရမျးစှဲလမျးမိနပွေီ” “အို… ဆရာရယျ” ကမြ ဆရာ့ကို ဂရုနာသကျဟနျနဲ့ မော့ကွညျ့မိတော့ သူ့လကျနှဈဖကျက ကမြပုခုံးပျေါလာကိုငျပွီး မကျြနှာကအောကျကို ညှတျကြ လာတယျ၊ သူဘာလုပျတော့မလဲဆိုတာ သိနတေဲ့ကမြ မကျြလုံးကလေးစငျးလို့ သူ့ရဲ့အနမျးတှခေံယူဖို့ ကမြနုတျခမျးတှေ မပှငျ့တပှငျ့ လေးဟထားပွီး လညျတိုငျကိုမော့ထားပေးမိတယျ၊ ကမြနှာခေါငျးထဲ ရမှေေးနံ့တဈခု ဝငျလာစဉျမှာပဲ ကမြနုတျခမျးဖူးဖူးလေးတှကေို စှဲစုပျခံလိုကျရတယျ၊ တကိုယျလုံးကို ဖိနျးရှနျးသှားပွီး ကမြအဖုတျထဲ ကငျြခနဲ ခံစားမိလိုကျတယျ၊ သူ့လကျတှကေလညျး ပုခုံး ပျေါကနေ ခပြွီး ကမြရဲ့ခါးသိမျသိမျကဈြကဈြလေးကို သူ့ကိုယျနဲ့ထိ အောငျစှဲကပျပဈလိုကျတယျ၊ အတှငျးခံဘောငျးဘီထဲမှာ မာ တောငျနပွေီဖွဈတဲ့ သူ့လီးကွီးနဲ့ ကမြဆီးခုံကိုလာထောကျတော့ ကာမစိတျတှေ ပိုပွီးထကွှလာတော့တာပေါ့၊
ကမြနုတျခမျးကိုလညျး တယုတယနဲ့စုပျပေးရငျး လကျက ကမြရဲ့စှငျ့ကားနတေဲ့ တငျသားတှပေျေါ အလိုကျသငျ့ပှတျပေးနသေေး တယျ၊ နောကျတော့ အတှငျးခံဘောငျးဘီထဲကို လကျနှဈဖကျရှိူသှငျးပွီး တငျသားတှအေောကျကနပေငျ့ဆှဲလို့ ကမြဖငျနှဈခွမျးကို ဖွဲ လိုကျ စုတျခွလေိုကျပှတျလိုကျနဲ့ တဈခကျြတဈခကျြ အတှငျးခံပျေါကနေ သူ့လီးကွီးနဲ့ ကမြအဖုတျကို ပငျ့ပငျ့ထိုးနလေိုကျတာ ကမြ ဖွငျ့ အရမျးစိတျလှုပျရှားပွီး ပွီးလုပွီးခငျြတောငျ ဖွဈဖွဈသှားမိတယျ။ ကနြေျာ့ရဲ့ ပွုစုယုယမှုတှအေောကျမှာ သူမတျောတျောထနျ နပွေီဆိုတာ ကနြေျာ့ခါးကို သူမလကျနှဈဖကျနဲ့ တငျးတငျးကွပျကွပျလာဖကျထားတာကို ကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ၊ သူမရဲ့ပုံစံ လေးက အသားဖှေးဖှေးနှာတံစငျးစငျးနဲ့ နုတျခမျးလေးတှကေလညျး ဖောငျးအိအိလေးတှေ၊ စုပျနရေငျးနဲ့ခြိုခြိုလာသလိုပဲ၊ မလှတျ ခငျြတော့လောကျအောငျပါပဲလေ။ သူမရဲ့ခန်ဓာကိုယျကလညျး ခါးလေးကဉျြးကဉျြးနဲ့ တငျသားတှနေောကျကို စှငျ့ကားနပွေီး ပေါငျတံ လေးတှကေစငျးကနြတေော့ လေးဘကျထောကျခိုငျးပွီး နောကျကနေ သူမအဖုတျလေးကို စောငျ့လိုးပဈခငျြစိတျတှေ ပေါကျလာ တော့ တယျ၊ ဒါနဲ့ သူမအဖုတျလေးကို အတှငျးခံဘောငျးဘီထဲကနေ နှိုကျလိုကျမိတယျ၊ Ooh… အရညျတှရှေဲလို့ သူမဘယျလောကျ တောငျ ခံခငျြနပွေီလဲမသိဘူး၊ ကနြျောလညျး သူမ စောကျစိလေးကို လကျခလယျနဲ့ပှတျခပြေေးလိုကျတယျ။ “အငျ့ခနဲ” အသံထှကျ လို့ ကနြေျာ့ကို မော့ကွညျ့လာတယျ။
“ဆရာ..ဧညျ့ခနျးကွီးထဲမှာ မကောငျးဘူး တျောပွီကှာ” မောဟိုကျနတေဲ့ လသေံနဲ့ ကနြေျာ့ကို ဆကျမလုပျဖို့တားတယျ။ အရှိနျ တကျနပွေီဆိုမှ လာတားတော့ နညျးနညျးဖီးလျပကျြသှားရတာပေါ့။ “ဟာ…ညီမကလဲ၊ ဘယျသူမှ မရှိပါဘူး၊ ဆရာ့စိတျတှမေထိနျး နိုငျတော့ဘူး” “ဟငျ..! မောငျလာလို့ရငျ တှသှေ့ားလိမျ့မယျ” “မလာသေးပါဘူးကှာ” နှဈယောကျစလုံး ဇာတျရှိနျမွငျ့နကွေပွီဆိုပေ မယျ့ ……… ဒီထကျပိုဆကျလုပျဖို့ တကယျတမျးကတြော့ ကမြ မဝံ့မရဲဖွဈနမေိပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့လညျး ကမြစိတျကိုကမြ ၃မိနဈ ကွာအောငျတောငျ မထိနျးခြုပျနိုငျတော့ပါဘူး၊ ကမြစိတျတှေ အရမျးထနျနပွေီလေ။ ဆရာ့ကိုလညျး တားလို့ရမှာမဟုတျဘူးဆိုတာ သိနတေော့ စိတျရဲ့စရောအတိုငျး ကမြနဲ့မောငျနဲ့အိပျတဲ့ အခနျးထဲ ချေါသှားလိုကျမိတော့တယျ။ အခနျးထဲရောကျတော့ ကမြ အဝတျအစားတှေ အကုနျခြှတျပဈပွီး ကုတငျပျေါပကျလကျလှဲ ဒူးနှဈဖကျထောငျထားပေးလိုကျတယျ၊ ဆရာလညျးအဝတျတှေ အကုနျခြှတျလို့လီးကွီး တရမျးရမျးနဲ့ ကုတငျပျေါတကျလာတယျ၊ သူ့လီးဒဈကွီးက ပွဲလနျပွီးကားနတောပဲ၊ ဂှေးဥနှဈလုံးကလညျး အမှေးဗလပှနဲ့ မောငျ့လီးလို ရှငျးပွီးလုံးခြောမနဘေူး၊ လီးခြောငျးကွီးကလညျး သံခြောငျလိုမာတောငျနပွေီး အကွောတပွိုငျးပွိုငျးနဲ့ ဖုထဈနလေိုကျတာ ကမြဖွငျ့ ကွညျ့နရေငျးနဲ့ ကွကျသီး တှတေောငျ ထလာမိတယျ။
ကုတငျပျေါရောကျလာတော့ ကမြခွရေငျးမှာ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျတယျ၊ နောကျပွီး ကမြခွထေောကျနှဈခြောငျးကို သူ့လကျနှဈ ဖကျနဲ့ ဒူးကောကျကှေးကနကေိုငျပွီး ကမြနို့အုံ ဘေးထိ ဖိခလြိုကျတော့ ကုတငျကနေ ကမြရဲ့ခါးအောကျပိုငျးတဈခုလုံး မွောကျတကျ သှားတယျ၊ ကမြဖငျနှဈခွမျးကတော့ အစှမျးကုနျစှငျ့ကားပွီး ပွဲနတေော့တာပေါ့။ ဆရာက သူလိုခငျြတဲ့ အနအေထားလညျးရောကျ ရော စောကျရညျတှရှေဲပွီး ပွဲအာနတေဲ့ ကမြအဖုတျအုံတဈခုလုံးကို ငုံ့ပွီး သူ့ပါးစပျထဲခနငုံထားလိုကျတယျ၊ ပွီးမှ ကမြအဖုတျတ ပွငျလုံးကို လြှာပွားနဲ့လြှကျလိုကျ၊ ဘေးနုတျခမျးသားတှေ လြှကျပေးလိုကျနဲ့ စောကျစိကိုလညျး ကြှတျထှကျမတကျစုပျပေးနတေော့ ကမြမှာ တအငျးအငျး ငွီးငွူလို့ ကမြဒူးကောကျကှေးကို တှနျးဖိထားတဲ့ သူ့လကျကို ရောငျရမျးပွီး ဆှဲထားလိုကျမိတယျ။ “အငျ..အငျ…အာ့..အာ..အာ ဆရာ. ဆရာရယျ…ညီမ အရမျးကောငျးနပွေီ” “ညီမအပျေါ တကျလိုးပေးပါတော့နျော” “ညီမ အရမျးခံခငျြနပွေီလားဟငျ” “ဟုတျ..၊ အရမျးခံခငျြနပွေီ၊ ဆရာ့လီးကွီးကို ညီမအဖုတျထဲသှငျးပေးပါတော့” “စိတျခပြါ ညီမရယျ၊ အ ကွာကွီးသှငျးထားပေးမှာပါ” ဆရာကပွောပွောဆိုဆို အလိုကျသငျ့ကားပေးထားတဲ့ ကမြအဖုတျထဲကို သူ့လီးကွီး ဒဈမွုပျရုံလေး သှငျးပွီး ဆော့ပေးနသေေးတယျ၊ နောကျမှ အဆုံးထိမွုပျအောငျသှငျးလို့ မစောငျ့သေးဘဲ ကမြနို့တှကေို ကိုငျစုပျပေးနလေိုကျတယျ၊ ခနကွာတော့ နို့စုပျတာရပျပွီး ကမြခါးကိုကိုငျလို့ တဖကျဖကျနဲ့စောငျ့လိုးတော့တာပဲ၊ စောကျဖုတျထဲကို တငျးကွပျပွီးဝငျဝငျလာတဲ့ သူ့လီးကွီးက ကမြသားအိမျကို လာလာထောကျနတေော့ ကောငျးကလညျးကောငျးနဲ့ မကျြနှာတဈခုလုံး ရှုံ့မဲ့ပွီး ခံနမေိတော့တယျ။
“အား…အားး အဟငျ့ အား……နာတယျ” “အား ကောငျးလိုကျတာညီမရယျ၊ ညီမအျောတဲ့အသံလေးက ဆရာ့လီးကိုပိုကွီးလာသလို ပဲ” “အငျ့…အငျ့..ရှီးးးး အားးးး”ိ”ဖကျ ဖကျ ဖကျ ဖကျ” “အား..သပေါပွီ..၊ ဆရာရယျ ခံလို့လညျး အရမျးကောငျးတာပဲရှငျ” မောငျ့ သူငယျခငျြး ဆရာဝနျရဲ့ စောငျ့လိုးခကျြတှအေောကျမှာ ကမြ နာလို့အျောမိလိုကျ ကောငျးလို့ညညျးမိလိုကျနဲ့ နာရီဝကျလောကျကွာတဲ့ ထိ အောကျကနေ ကားကားလေးခံနမေိတယျ၊ အပျေါကလိုးရတာညောငျးတော့ ကမြကို သူ့အပျေါတကျပွီး စောငျ့ခိုငျးတယျ၊ ကမြ လညျး နှဈခါပွောစရာမလိုအောငျဘဲ သူ့အပျေါတကျခှပွီး ကမြကိုယျတိုငျသူ့လီးကွီးကိုကိုငျကာ ကမြအဖုတျဝမှာတပွေီ့း ဖိခလြိုကျ တယျ၊ နောကျတော့ အပျေါကနေ စောငျ့ပေးလိုကျ ဇကောဝိုငျးပေးလိုကျနဲ့ ပုံစံအမြိုးမြိုးပွောငျးပွီး ညှောငျ့ပေးနမေိပါတယျ။ “ညီမ လေးဘကျထောကျပေးတော့၊ ညီမရဲ့ဖငျကွီးကို နောကျကနကွေညျ့ပွီး လိုးခငျြလို့” “ဟုတျ ဆရာ၊ ဆရာသဘောရှိတဲ့တိုငျးလုပျဖို့ အကုနျပေးထားပွီသားပါနျော” “ညီမက အရမျးခဈြဖို့ကောငျးလိုကျတာကှာ”
ကမြလညျး ဆရာရဲ့ဆန်ဒကို မလှနျဆနျနိုငျလောကျ အောငျပဲ ကာမစိတျတှေ မှနျထူနပွေီ၊ ဆရာ့လီးကွီးကိုလညျး အရမျးစှဲနမေိပါပွီလေ၊ သူပွောတဲ့အတိုငျး ဒူးကလေးထောကျလို့ ဖငျ ကိုအစှမျးကုနျ ကော့ထောငျပေးလိုကျတယျ၊ ဆရာကနောကျကနေ ကမြဖငျကွီးကို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့နပွေီးမှ ပွူထှကျနတေဲ့ ကမြ အဖုတျထဲကို အကွောပွိုငျးပွိုငျးထနတေဲ့ သူ့လီးတုတျတုတျကွီးနဲ့ တဆုံးထိုးခလြို့ ကမြပုခုံးနှဈဖကျကို ကိုငျဆှဲပွီး မီးကုနျရမျးကုနျ စောငျ့လိုးပွနျတော့တယျ၊ ကမြလညျး ဆရာရဲ့စောငျ့ခကျြတိုငျးကို ဖငျတရမျးရမျးနဲ့ ကကြေနြေပျနပျကွီး ခံယူနမေိတယျ၊ ဆရာက နောကျကလိုးနရေငျး ကမြတငျပါးတှရေိုကျလို့ သူ့လီးကွီးကို ကမြဖငျနဲ့ပွနျပွနျစောငျ့ခိုငျးသေးတယျ၊ ကမြလညျး ရှကေ့နပွေနျစောငျ့ ပေးလိုကျ ဆရာကနောကျကစောငျ့လိုးလိုကျနဲ့ စညျးခကျြဝါးခကျြကိုညီလို့ ၁၅မိနဈလောကျကွာမှ ကမြအဖုတျထဲကို သူ့လရညျတှေ တဗငျြးဗငျြးနဲ့ ပနျးထုတျနလေိုကျတာမြား ကမြအဖုတျထဲကို ဆညျကြိုးကနြသေလားမှတျရတယျ တစကျစကျနဲ့ ထုတျလို့ကို မပွီးနိုငျ တော့ပါဘူးရှငျ။
မောင်နဲ့ကျမ ညားခဲ့တာ ၃နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပေမယ့် ခုထိကလေးမရသေးဘူး။ မောင်က ကလေးအရမ်းလိုချင်လို့ ဆေးပေါင်းစုံ နည်းပေါင်းစုံသုံးခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ကလေးမရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမယ့် ချွင်းချက်က မောင့်ဘက်ကဖြစ်နေ တော့ ကျမလည်းဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲလေ။ မောင်အရမ်းတောင်းတတဲ့ မိသားစုဘဝလေးက ကျမတို့အတွက် အိပ်မက်တစ်ခုသာ ဖြစ်နေပါ တော့တယ်။ မောင်ကတော့ လက်မလျော့သေးပါဘူး ခုလည်း သူ့မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့ ဆရာဝန်က နည်းလမ်းတစ်ခု အကြံပေးခဲ့တယ်တဲ့။ ဖန်ဖြွန်သန္ဓေသားနဲ့လုပ်ရင်လည်း မောင်ရဲ့သုတ်ရည်က မအောင်တော့ အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဲဒေါ့…. တစ်ခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ သုတ်ရည်ကို ကာမဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲ ကျမသားအိမ်ထဲကို ထည့် ပေးရင် ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ မောင့်ဘက်ကသဘောတူလက်ခံရင် စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဆေးခန်းလာခဲ့ပါ သူကူညီပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မောင်ကစိတ်အားတက်ကြွစွာ ပြောပြနေတော့ ကျမလည်း ခေါင်းငြိမ့်ရတာ ပေါ့။ “ဒါနဲ့ မောင် ဘယ်သူ့ကိုခေါ်သွားမှာလဲဟင်” “ယုံကြည်ရမယ့်သူရော ရှိလို့လား” လို့မေးတော့ မောင်က…
“မောင်လည်းအဲ့ဒါ စဉ်းစားနေတာ၊ မျိုးရိုးကောင်းတဲ့သူ လည်းဖြစ်စေချင်တယ်၊ မောင်ရဲ့မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်ကိုပဲ ထပ်ပြီး အကူညီ တောင်းရတာပေါ့ကွာ” “အင်းပါ မောင်ရယ်..၊ ကလေးရလာရင်ရော မောင့်ရဲ့ သွေးသားအရင်းလို ချစ်နိုင်ပါ့မလား မောင်က” “ချစ် မှာပေါ့.. မောင်ကိုယ်တိုင်လိုချင်လို့ စီစဉ်ထားတာပဲ” ဒါမဲ့ ကျမစိတ်ထဲမှာ သိပ်ပြီးအလိုမကျချင်ဘူး။ ကိုယ့်ယောက်ျားမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူရဲ့ရင်သွေးကို လွယ်ပြီးမွေးရမှာ ဆိုတော့ စိတ်ထဲမချင့်မရဲနဲ့ သစ္စာဖောက်သလိုများ ဖြစ်နေမလားတွေးပြီး စိုးရိမ်မိတယ်။ ကျမမောင့်ကို မော့ကြည့်တော့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည် သန်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတေနဲ့ ပြုံးနေတာတွေ့ရတယ်။ “မောင်..” “ဟင်..ပြောလေ ချစ်..” “ချစ် မောင့်ကိုသစ္စာဖောက်သလို ဖြစ်နေမှာစိုးတယ်” တိုးတိတ်ညင်သာတဲ့ အသံလေးနဲ့ပြောပြီး ကျမ မောင့်ကို တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်မိတယ်။
မောင်ကလည်း ကျမကိုယ်လေးကို သိုင်းဖက်လို့ နဖူးလေးကို ဖွဖွလေး ငုံ့နမ်းလာတယ်။ “အာ့တော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ မောင့်ချစ်ဇနီးလှလှ လေးကို တစ်ခြားသူ လက်ဖျားနဲ့ထိတာတောင် မခံနိုင်ပါဘူး၊ ဒါကလည်း အထိအတွေ့နဲ့ဆက်ဆံတာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ အရည်ကိုဆေး ထိုးပိုက်ထဲထည့်ပြီး ချစ် သားအိမ်ထဲ ကိုသွင်းရုံပါကွာ” “အင်းပါ၊ မောင်ကချစ်ကို အချစ်ပေါ့သွားမှာစိုးလို့ပါ” အချစ်တွေက တိုးပြီး တောင်လာမှာပါကွာဆိုးပြီး ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရနမ်းလိုက်တယ်။ ကျမလည်း မောင့်ခါးကို ပိုတင်းပြီးဖက်လိုက်တော့ မောင့်ရဲ့လီးကြီးကထောင်လို့ ဆီးခုံကိုလာထောက်နေတော့တာပေါ့။ နှစ်ယောက်သား ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ရင်းနဲ့ ကာမစိတ်တွေကလည်း တက်လာ အိမ်မှာကလည်း နှစ်ယောက်တည်းနေတာ ဆိုတော့ ဧည့်ခန်းထဲက စားပွဲပေါ်မှာပဲ ကျမလက်နှစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီး ခြေ နှစ်ချောင်းကိုကားလို့ ဖင်လေးကိုကော့ထားပေးလိုက်တယ်၊ မောင်ကလည်း ကျမလုံချည်ကို ချွတ်ချလို့ စွန့်ကားနေတဲ့ ဖင်နှစ်ခြမ်း အောက်မှာ ပြူထွက်နေတဲ့ ကျမအဖုတ်လေးထဲကို သူ့လီးကြီးကိုအဆုံးထိထည့်ပြီး နောက်ကနေ စောင့်စောင့်လိုးပေးတော့တာ ပေါ့..။
ကျမဖင်သားတွေနဲ့ မောင့်ရဲ့ပေါင်တွေနဲ့ရိုက်တဲ့အသံကလည်း တဖက်ဖက်နဲ့ စည်းချက်ကိုညီလို့။ “ဖက်ဖက်..ဖက်ဖက်” “အ ဟင့်..ဟင့်” “အား…” “အား..ကောင်းလိုက်တာ၊ ချစ်အဖုတ်လေးကအရမ်း လိုးလို့ကောင်းတာပဲ” “ချစ် အဖုတ်ကမောင် တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပါပဲ မောင် စိတ်ကြိုက်လိုးပေါ့လို့” ကျမလည်း ညည်းငြူသံလေးနဲ့ စကားတွေတတွတ်တွတ် ပြောပြီး ဖင်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက် ကော့ကော့ထိုးပေးပြီး ခံနေမိတယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ပြီးသွားတယ်။ နှစ်ယောက်အတူ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး ရေချိုးကြရင်းနဲ့ တစ်ချီ ဆက်လိုးဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တော့ မောင်နဲ့ကျမ သူ့ မိတ်ဆွေဆရာဝန်ဆီ ကားနဲ့သွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဆေးခန်းမှာလည်း လူတွေရှုပ်လို့ ညနေမှအေးဆေး ပြန်လာခဲ့ပါပြော တာနဲ့ အိမ်ကိုပဲမောင်းပြီး ပြန်လာရတယ်၊ ညနေ ၃နာရီခွဲလောက်ရောက်တော့ ဆရာဝန်ကမောင့်ဆီကို ဖုန်းဆက်လာတယ်၊ လာခဲ့ တော့တဲ့၊ မောင်ကလည်း ဖုန်းထဲမှာပဲ တစ်ခြားလူရှာဖို့ အဆင်မပြေကြောင်းနဲ့ ဆရာပဲအစဆုံးကူညီပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ လူရင်းတွေဆိုတော့ ဆရာဝန်ကလည်းကူညီပါ့မယ်ဆိုတာနဲ့ ကျမတို့ ဆေးခန်းကို တစ်ခေါက်ထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်။
ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆရာဝန်ကအသင့်စောင့်ကြိုနေတယ်။ ပြီး သူ့ရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီး အကျိုးကြောင်းအကုန်ရှင်းပြတယ်။ သုတ် ရည်ကို ၃ရက်လောက်ဆက်တိုက်ထည့်မှ စိတ်ချ နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အရည်ကိုလည်းပူပူနွေးနွေးမခြောက်ခင်ထည့်ရမှာမို့ ရောက်လာမှပဲထုတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြော ပြတယ်။ “ဒီလောက်ဆိုနားလည်ပီမလား၊ ကျနော်လည်းတစ်ခါမှ ခုလိုမကူညီပေးခဲ့ဖူး ဘူး၊ မိတ်ဆွေရင်းမို့ပါဗျာ” မောင်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး ဆရာအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် စရအောင်ပြောတော့ ဆရာဝန်က ခနနော် အိမ်သာထဲဝင်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး ထထွက်သွားတယ်။ ကျမတို့ ရုံးခန်းလေးထဲမှာပဲ စောင့်နေလိုက်တယ်။ အိမ်သာ ထဲ ဘာလို့သွားလဲဆိုတာ ကျမစိတ်ထဲသိပါတယ်၊ သူ့လရည်တွေ ထွက်အောင် ဂွင်းသွားထုဖို့ဆိုတာ ပြီးရင် သူ့လရည်တွေကို ဆေး ထိုးပိုက်နဲ့ ကျမအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်တော့မှာကို တွေးမိတော့ မလုံမလဲနဲ့ မောင့်ရှေ့မှာ ရှက်ပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ထားရတယ်။
ခနအကြာမှာတော့ အိတ်လေးတစ်ခုကိုင်ပြီး ဆရာဝန် ရုံးခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။ “ကဲ…ရပြီ၊ ခင်ဗျားမိန်းမကို အပြင်ကကုတင်မှာ လှဲခိုင်းလိုက်ပါ” “ဟုတ်..ဆရာ” မောင်ကကျမလက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲခိုင်းလိုက်တယ်၊ ကျမလည်းမယောင်မလည်နဲ့ လှဲအိပ်နေလိုက်ရတာပေါ့၊ ဆရာဝန်က ခုနယူလာတဲ့ အိတ်ထဲကအရည်ဖြူဖြူတွေကို အပ်မပါတဲ့ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ ကုန်တဲ့ထိစုပ်ယူနေ တယ်၊ပြီးတော့ ကျမရဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ကို ထောင်ခိုင်းတယ်၊ ဆရာဝန်က အပ်ကြီးမြှောက်မြှောက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ဘေးတစောင်းထိုင် နေရာယူပြီး ဘာမှရှက်မနေဖို့နဲ့ အတွင်းခံလည်းချွတ်လိုက်ပါအုံးလို့ ပြောလာတယ်၊ မောင်ကတော့ ကျမဘေးနားမှာ ဘာမှမဖြစ် သလိုရပ်ကြည့်နေလေရဲ့၊ ကျမဖြင့်ရှက်လွန်းလို့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး မောင့်လက်ကိုစုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိတယ်၊ ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ် မသိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့မှာ အတွင်းခံချွတ်ပြီးတောင် ပြရတော့မှာဆိုတော့ ၊ ဒါမဲ့…မောင်အရမ်းလိုချင်တဲ့ မိသားစုဘဝ လေးကိုတော့ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်မိတယ်၊ ဒါနဲ့ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ပေါင်လယ်လောက်ထိချွတ်ပေးလိုက်တယ်၊
ဆရာဝန်ရဲ့လက်တစ်ဖက်က ဆေးထိုးပိုက်ကိုကိုင်လို့ တစ်ဖက်က ကျမဒူးကိုကိုင်ပြီး ဖိဖြဲချလိုက်တယ်၊ ပြီးမှဆေးထိုးအပ်တံအရင်း ထိရောက်အောင် ကျမအဖုတ်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးချလိုက်တာ အေးစက်စက်မာတောင့်တောင့်ကြီးဆိုတော့ နည်းနည်းနာသွား တာပေါ့၊ အပ်ထဲကအရည်တွေ ထိုးချလိုက်တော့မှ အဖုတ်ထဲမှာ ပူနွေးနွေးကြီးနဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့လရည်တွေက လျောခနဲကျမသားအိမ် ထဲကို ဝင်သွားပါတော့တယ်။ ပြီးတာနဲ့ အတွင်းခံကိုပြန်ဝတ် လုံချည်ကိုပြန်ဖုံးလို့ ချက်ခြင်းထထိုင်လိုက်တယ်၊ ဆရာဝန်ရဲ့မျက်နှာကို မကြည့်ရဲတော့ဘူး၊ ရှက်လွန်းလို့မျက်နှာကိုနီရဲနေတာပဲ။ “ကဲ..စိတ်ချရအောင် နောက်နှစ်ရက်တော့ဆက်တိုက် လာခဲ့အုံးနော်” “ဟုတ်” ကျမတို့လည်း ဆရာဝန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ နောက်ညနေမှာလည်း ဆရာဝန်မှာတဲ့အတိုင်း မောင်နဲ့ကျမ ထပ်လာခဲ့ကြတယ်၊ အရင်နေ့ကလိုပဲ ဆရာဝန်ကအိမ်သာထဲဝင်သွားပြန်တာပေါ့၊ အဲ့ချိန်မှာပဲ မောင့်ဆီဖုန်းဝင်လာလို့ အပြင်ထွက် ပြီးဖုန်းသွားပြောတယ်၊ ခနနေပြန်ရောက်လာပြီး မောင့်အလုပ်ရှင်က အရေးကြီးလို့လာခဲ့ပါအုံးတဲ့ ခနနေပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး ထွက် သွားပါတော့တယ်။ ကျမလည်း တစ်ယောက်တည်းဆက်စောင့်နေရင်းနဲ့ ဆရာဝန်က နာရီဝက်လောက်ကြာမှ ထွက်လာတယ်။
ကျမတစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတာမြင်တော့ မျက်မှောက်ကျုံ့သွားပြီး “မင်းယောကျာ်းရော”တဲ့ “သူ့အလုပ်ပြန်သွားတယ်၊ ခနနေ ပြန်လာမယ်တဲ့” “ရပြီလား…ဆရာ” မေးလိုက်တော့ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလို့ မောဟိုက်နေတဲ့လေသံနဲ့ ပြန်ဖြေရှာတယ် ။ “ပြော ရမှာတော့ အားနာတယ်ဗျာ၊ နေ့လယ်က မိန်းမနဲ့ရန်ဖြစ်တော့ စိတ်ညစ်နေလို့ လုံးဝမထွက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ” “ဟင်..ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ပြန်ရတော့မှာပေါ့” “ဒီလိုလုပ်ပါ့လား၊ တစ်မျိုးတော့မထင်ပါနဲ့၊ ညီမဟာလည်းမြင်ဖူးပြီးသားဆိုတော့ မနေ့ကလို ပဲ ချွတ်ပြီး ထောင်ပြထားပေးပါ့လား” “ဆရာကြည့်ပြီးထုမယ်ဆို ထွက်လောက်မှာပါ” ကျမလည်း စဉ်းစားမိတယ်၊ နှစ်ယောက် တည်းဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားလို့ပေါ့၊ ဒါမယ့်..ဒီနေ့အလုပ်မဖြစ်ရင် နောက်တစ်ရက်ထပ်တိုးပြီးလာရမှာ စိုးတာနဲ့ ဆရာဝန်ပြောသလို လက်ခံလိုက်တော့တယ်။ ကျမ ကုတင်ပေါ်တတ် လုံချည်လှန်ပြီး အတွင်းခံချွတ်ချပေးလိုက်တယ်၊ မထူးပါဘူးဆိုပြီး မြန်မြန်ပြီး သွားရအောင် ဒူးနှစ်ဖက်ပါထောင်ပြီး ကားထားပေးလိုက်တယ်။
ဆရာဝန်လည်း ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး ကျမခြေရင်းမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချပြီး ပုဆိုးလှန်ကာ ပြဲအာနေတဲ့ ကျမအဖုတ်ကိုကြည့်လို့ တအင်းအင်းနဲ့ ဂွင်းထုနေပါတော့တယ်။ ကျမအဖုတ်ကိုကြည့်ရင်း တအင်းအင်းနဲ့ထုနေတဲ့အသံကြားတော့ ကျမစိတ်ထဲ မရိုးမရွှ ဖြစ်လာရတာပေါ့၊ အဖုတ်အတွင်းသားတွေပါ ယားလာပြီး အရည်တောင်စို့လာနေသလိုပါပဲ၊ ဆရာဝန်လည်း အရှိန်ရလာလို့ထင်ပါရဲ့ ကျမဒူးတစ်ဖက်ကိုတွန်းကိုင်လို့ ရှေ့ကိုကုန်းပြီး ထုလာတယ်။ နောက်တော့ သူ့လက်က ဒူးပေါ်ကနေ ကျမပေါင်သားတွေဆီ မသိမသာ ပွတ်သပ်လာတယ်၊ ကျမလည်းမသိသလိုနေလိုက်မိတယ်၊ ကျမမှာ တစ်စိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်ရင်းထိပွတ် သပ်လာတဲ့ အထိတွေ့ကြောင့် ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ မသိစိတ်ထဲက ကာမစိတ်တွေထလာမိတယ်ရှင်။ “ညီမ” “ရှင်” လှိုက်ဖိုနေတဲ့အသံနဲ့ ကျမပြန်ထူးမိတယ်။ “ညီမအဖုတ်လေးကိုကြည့်ပြီး လုပ်ချင်လာပြီကွာ အဓိက ညီမအဖုတ်ထဲဆရာ့လရည်တွေ ဝင်ဖို့ပဲလေ” “ဆေးထိုးပိုက်မလိုတော့ပါဘူး ဆရာ့ဟာကြီးကိုယ်တိုင်ပဲ ညီမအဖုတ်လေးထဲသွင်းပြီး လရည်တွေ ထုတ်ပေးတော့မယ်နော်” “ဟင်..မောင်ပြန်လာရင် သေလိမ့်မယ်” “မလာနိုင်သေးပါဘူးကွာ” ဆိုပြီး ထောင်မတ်နေတဲ့ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ကျမအဖုတ် ပေါ် လာထောက်ထားတော့တယ်။ ကျမလည်း စိတ်ရဲ့စေရာအတိုင်း မငြင်းမိဘူး။
ကျမဆီက အသံမကြားရတော့ ကျမအဖုတ်လေးကိုဖြဲပြီး နီရဲနေတဲ့ သူ့လီးဒစ်ကြီးကို ထိုးစိုက်ချလိုက်တယ်၊ သူ့ဒစ်ကြီးက ကား ကားကြီးနဲ့အကြီးရီးဆိုတော့ အဖုတ်ဝမှာ ဝင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျမမှာ အသက်အောင့်လို့ “အင်း”ကနဲ ခါးကော့ခေါင်းမော့ သွားပြီး လက်နှစ်ဖက်က အိပ်ရာခင်းစကို သတိလက်လွတ် ဆွဲချေစုပ်ကိုင်ထားမိတယ်။ “အားးး..ဆရာ နာတယ်..” ရှုံ့မဲ့မဲ့မျက်နှာလေးဖြင့် အသနားခံသလို ညုသလိုအသံလေးနဲ့ပြောလာတော့ ကျနော်လည်း စိတ်တွေပိုထလာပြီး လီးကိုအဆုံးထိ ထိုးချပစ်လိုက်တယ်။ “အားးးးသေပါပီ” “နောက်တော့ ဆရာဟာကြီးကို ကြိုက်သွားမှာပါကွာ”လို့ ပြောပြီး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့ ဇနီးလှလှလေးကို စိတ်ရှိလက်ရှိ စောင့်လိုးနေလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျမမှာ အသက်အောင့်လို့ “အင်း”ကနဲ ခါးကော့ခေါင်းမော့ သွားပြီး လက်နှစ်ဖက် က အိပ်ရာခင်းစကို သတိလက်လွတ် ဆွဲချေစုပ်ကိုင်ထားမိတယ်။ “အားးး..ဆရာ နာတယ်..” ရှုံ့မဲ့မဲ့မျက်နှာလေးဖြင့် အသနားခံ သလို ညုသလိုအသံလေးနဲ့ပြောလာတော့ ကျနော်လည်း စိတ်တွေပိုထလာပြီး လီးကိုအဆုံးထိ ထိုးချပစ်လိုက်တယ်။ “အားးးးသေ ပါပီ” “နောက်တော့ ဆရာဟာကြီးကို ကြိုက်သွားမှာပါကွာ”လို့ ပြောပြီး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့ ဇနီးလှလှလေးကို စိတ်ရှိ လက်ရှိ စောင့်လိုးနေလိုက်ပါတော့တယ်။
သူ့ဆေးခန်းက ကုတင်လေးကလှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ ကျမအပေါ်ကနေ စောင့်လိုးနေလိုက်တာ တကျွီကျွီနဲ့ ယိမ်းထိုးနေတော့တာပဲ၊ ခုလိုး နေတဲ့လူက ကျမယောက်ျားမဟုတ်ပေမယ့် အဖုတ်ထဲကို ပြည့်သိပ်ပြီးဝင်ဝင်လာတဲ့ သူ့လီးကြီးကြောင့် ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန်ကားထားပေးမိတယ်။ မောင်ပြန်လာရင်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကလည်း ရှိသေးတာမို့ အရမ်းကောင်းနေပေမယ့် မြန်မြန်ပြီး စေချင်နေရတာပေါ့။ “ဆရာရယ်..မြန်မြန်ပြီးလိုက်ပါတော့” “အင်းးးး ပြီးတော့မှာပါ..အားးးကောင်းလိုက်တာညီမရယ်၊ ညီမ အဖုတ်လေးကစီးပိုင်နေတော့ ဆရာ့လီးကြီးထုတ် တောင်မထုတ်ချင်တော့ဘူး” “ဟင်..မထုတ်လို့တော့ဘယ်ရမလဲ၊ သူများမယား ကို” ကျမလည်း ဟန်ဆောင်ပြီးပြောနေပေမယ့် စိတ်ထဲကသူ့လီးကြီးကို ကျမအဖုတ်ထဲစိမ်ပြီး ညှစ်ထားပေးချင်သေးတာပေါ့။
အရမ်းကောင်းနေတဲ့ သူမမျက်နှာလေးကြည့်ပြီး အကြာကြီး ဇိမ်စွဲလိုးချင်သေးပေမယ့် သူမယောက်ျားပြန်လာရင် ကောင်းခန်း ရောက်မှ မီးပျက်ဆိုသလိုဖြစ်မှာဆိုးတာနဲ့ပဲ ကျနော်လည်း မြန်မြန်လေးစောင့်လိုးပေးပြီး သူမအဖုတ်ထဲကို ကျနော့်လရည်တွေ အဆက်မပြတ် ပန်းထုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ “ကဲ..ညီမလိုချင်တဲ့ ဆရာ့လရည်တွေ ညီမအဖုတ်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်” “ဟာ…ဆရာကလဲ” ပြီးလည်းပြီးသွားရော ကျမမျက်နှာတစ်လုံး နီရဲနေတာပါပဲ၊ သူ့လရည်တွေ ပေကျံနေတဲ့ ကျမအဖုတ်တစ်ဝိုက် ကိုလည်း တစ်ရှူးစနဲ့သုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်၊ ပြီးမှ အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ် ရုံးခန်းထဲမှာ မောင့်ကိုထိုင်စောင့်နေလိုက်ကြ တယ်၊ နှစ်ယောက်တည်းအခန်းလေးထဲမှာ အနေရခက်လာတာနဲ့ မောင့်ဆီဖုန်းဆက်ပြီး Taxiငှားပြီးပြန်လိုက်တော့မယ်၊ မောင်အား တဲ့နေ့မှ ပြန်လာရအောင်ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်တယ်၊ မောင်သဘောတူထားပေမယ့် မောင့်နောက်ကွယ်မှာ အခုလိုမျိုး ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ဆက်ဆံမိခဲ့သွားတာက ကျမရဲ့ အပြစ်တစ်ခုလိုခံစားရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် နောင်အရှုပ်အရှင်းမရှိရလေအောင် ဆရာဝန်ကို ကတိတောင်းရတယ်။
“ဆရာ..ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်နဲ့ ကျမတို့သိက္ခာကို ထောက်ပြီး ဒီကိစ္စကို ဒီမှာပဲထားပေးပါ၊ ကလေးရလာရင်လည်း ဘာမှမ ဆိုင်သလိုနေပါမယ်လို့ ကတိပေးပါ ဆရာ” “ပေးပါတယ်၊ ဆေးပညာအရ အကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ့မယ်၊ ညီမ ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကွယ်” “ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ” ကျမလည်း ဆရာ့ကိုနူတ်ဆက်ပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ မောင်ပြန်မရောက်သေးဘူး၊ ကျမတစ်ယောက်တည်း ဆရာဝန်နဲ့ကျူးလွန်မိတဲ့ အဖြစ်ကိုပြန်တွေးပြီး နောက်နေ့တွေသွားရ မှာ မဝံ့မရဲဖြစ်မိပါတယ်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ရလာတဲ့ကိုယ်ဝန်က ဆရာဝန်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ပဲ ဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖြေသိမ့်ရင်း အဝတ်စားလဲ ရေချိုးပြီး မောင့်ကိုစောင့်နေလိုက်တယ်၊ ၆နာရီထိုးလောက်တော့ မောင်ပြန်လာတယ်၊ ကျမလည်း ဒီနေ့ အလုပ်မဖြစ်ကြောင်း လိမ်ညာပြီးပြောလိုက်တော့ မောင်ကနောက်ရက်တွေ ထပ်သွားတာပေါ့တဲ့၊ ကျမ မောင်မသိအောင် သက် ပြင်းတစ်ချက်ခိုးချလိုက်မိပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ရက်တွေ မောင်နဲ့ကျမနှစ်ယောက်တူပဲ သွားဖြစ်ကြတယ်၊ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ မောင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ရရှိရေးစီမံကိန်း ကြီး ပြီးသွားပါတော့တယ်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ မောင့်မိတ်ဆွေဆရာဝန် ကျမတို့အိမ်ကို ရံဖန်ရံခါရောက်ရောက်လာတတ် တယ်၊ အစတော့ ရိုးရိုးသားသားအလည်လာတယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကျမအပေါ်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေက မရိုးသားဘူးဆို တာ သတိထားမိလာတော့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်၊ သူနဲ့တစ်ခါလိုးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အသိကလည်း ကျမရဲ့ကာမစိတ်တွေ ကြွလာစေတာပေါ့၊ သုံးယောက်သားစကားပြောနေရင်း တစ်ခါတစ်ခါ ကျမသူ့ကို မခို့တရို့မျက်စောင်းထိုးထိုးပြီး ကြည့်မိတယ်၊ သူ ကလည်း ကျမယောက်ျားကွယ်ရာဆို မထိတထိစကားတွေ ပြောတတ်လာတယ်၊ တစ်ခါကဆို ဆရာဝန်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး ကို မောင်က ထမင်းဖိတ်ကျွေးတော့ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ မောင်နဲ့ကျမကတစ်ဖက် ကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဆရာဝန်ကထိုင်လို့ သူ့ မိန်းမကဘေးမှာထိုင်စားဖြစ်ကြတယ်၊ ကျမက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို စားပွဲအောက်တန်းပေါ်တင်ပြီးစားနေရင်း ခြေဖျားထိပ်ကို တစ်ခုခုထိသလိုဖြစ်လို့ မော့ကြည့်တော့ ဆရာကမသိလို ကျမကိုပြန်ကြည့်တယ်၊ ကျမလည်း ခေါင်းငုံ့ပြီး ထမင်းဆက်စားနေလိုက် တယ်၊ နောက်တစ်ခါကျ ကျမခြေဖမိုးပေါ် လာဖိထားတယ်၊ ဆရာလုပ်နေတာသိလို့ ကျမဘာမှမဖြစ်သလို ငြိမ်နေလိုက်တော့ ခြေသလုံးတွေထိပါပွတ်လာတယ်၊ နောက်ပိုင်းအားမရတော့ သူ့ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ညှပ်ပြီး ဆွဲချလိုက်တာ ကျမခြေနှစ်ချောင်းက စားပွဲ အောက်ဆန့်ဆန့်ကြီး ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ ကျမလုံချည်အောက်ကနေ သူ့ခြေထောက်တွေ ပေါင်ရင်းထိထိုးတက်လာတော့ ကျမလည်း စားပွဲရှေ့ကို မသိမသာတိုးကပ်လိုက်တယ်၊
ပြီးတော့ ကျမရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ သူ့ခြေမကြီးနဲ့ အဖုတ်ကို ထိုးကလိပေးနေတာ ထမင်းစားမပျက်ဟန်မပျက်ပါပဲ ထပြောလို့လည်းမကောင်း ဖြစ်နေတော့ သူကလိနေသမျှ ဟန်မပျက်ထမင်းဆက်စားနေလိုက်တယ်၊ အဖုတ်လည်းအရည်တွေရွှဲလို့ ထမင်းစားပြီး ဆရာဝန်လင်မယားပြန်သွားတာတောင် ကျမမှာ လှိုက်ဖိုကျန်ခဲ့ရတယ်၊ ည မောင်နဲ့လြိုး ဖစ်ကြတော့ မောင်က ကျမခြေနှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး ဖင်ထောင်လိုးတာ ကျမဖြင့်ကောင်းလွန်းလို့ တစ်ချက်တစ်ချက်ဆို ဆရာဝန်မျက်နှာကို ရောင်ရမ်းပြီး မြင်ယောင်မိသေးတာပေါ့ရှင်။ ကျမတို့ ထမင်းဖိတ်ကျွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျမတို့အိမ်ကို အလည်လာနေကျ ဆရာဝန် ပျောက်ချက်သားကောင်းနေခဲ့တယ်၊ မောင့်ကိုတော့ မမေးကြည့်မိပါဘူး၊ တော်ကြာတစ်မျိုးထင်သွားမှာဆိုးရတယ်လေ၊ ကျမမသိစိတ်ကပဲ တိတ်တခိုး မျှော်နေမိတာပါ၊ တစ်ခါပတ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဆေးပညာအရ ပတ်သက်ခဲ့တာဆိုတော့ လိပ်ပြာမလုံတော့ မဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ဘက်က နောက်ပိုင်းကျမအပေါ်ပြောင်းလဲဆက်ဆံလာမှုတွေအပေါ်တော့ သာယာသလိုလိုနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီး ကျမအဖုတ်လေးထဲ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ အားရပါးရ လိုးပေးမှာကို မဝံ့မရဲ မျှော်လင့်နေမိတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်လလောက်အကြာမှာတော့ ဆရာဝန် ကျမတို့အိမ်ကို ရောက်လာပါတယ်၊ သူရောက်လာတော့ မောင်ကမရှိဘူး၊ ကျမ တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ချိန်မှ ဆိုက်ဆိုက်မြုက်မြုက် ရောက်ချလာတာ၊ တမင်လာတာလား.. မသိလို့လာတာလား မပြောတတ်ဘူး၊ ဒါနဲ့ ကျမလည်း မောင်ပြန်မလာသေးဘူး..ဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့ မျက်နှာတမင်တည်ပြီး မေးလိုက်တော့… နယ်ဘက်ရောက်နေတဲ့ တွက် မလာဖြစ်တာကြာလို့ ဝင်လာတာဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပြီးကျမကိုယ်ဝန်ရမရ သေချာအောင် စစ်ပေးမလို့ လာတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတယ်။ “မသေချာရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆရာ” ကျမအတွန့်တက်ပြီး မေးလိုက်တော့ ဆရာတစ် ယောက်လုံးရှိတာပဲ ထပ်ပြီးလုပ်ပေးမှာပေါ့တဲ့… “ဟွန့်… လူလည်ကြီး” ဆိုပြီး ကျမနုတ်ခမ်းလေးစူ မျက် စောင်းလေးထိုးပြီး ကလေးတစ်ယောက်ဆိုးနွဲ့သလိုပုံစံမျိုးနဲ့ မျက်နှာကလေးစူပုပ်လို့နေလိုက်တယ်၊ ကျမတမင်သက်သက် ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ပြ နေတာပါ၊ ကျမရဲ့ကာမဆန္ဒတွေ ဆရာဝန်ဆီ ပုံချပေးချင်နေမိပါပြီ။
“လူလည်ကြီး မဟုတ်ပါဘူးကွာ.. ညီမဟာလေးက တစ်ခါတည်းနဲ့ တစ်သက်စွဲအောင် ကောင်းတာကိုး” “ဟင်…တကယ်ပေါ့” ကျ မလည်း မခို့တရို့မျက်နှာလေးနဲ့ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ “အင်းပေါ့၊ ညီမ… ညီမကိုဆရာအရမ်းစွဲလမ်းမိနေပြီ” “အို… ဆရာရယ်” ကျမ ဆရာ့ကို ဂရုနာသက်ဟန်နဲ့ မော့ကြည့်မိတော့ သူ့လက်နှစ်ဖက်က ကျမပုခုံးပေါ်လာကိုင်ပြီး မျက်နှာကအောက်ကို ညွှတ်ကျ လာတယ်၊ သူဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတာ သိနေတဲ့ကျမ မျက်လုံးကလေးစင်းလို့ သူ့ရဲ့အနမ်းတွေခံယူဖို့ ကျမနုတ်ခမ်းတွေ မပွင့်တပွင့် လေးဟထားပြီး လည်တိုင်ကိုမော့ထားပေးမိတယ်၊ ကျမနှာခေါင်းထဲ ရေမွှေးနံ့တစ်ခု ဝင်လာစဉ်မှာပဲ ကျမနုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို စွဲစုပ်ခံလိုက်ရတယ်၊ တကိုယ်လုံးကို ဖိန်းရှန်းသွားပြီး ကျမအဖုတ်ထဲ ကျင်ခနဲ ခံစားမိလိုက်တယ်၊ သူ့လက်တွေကလည်း ပုခုံး ပေါ်ကနေ ချပြီး ကျမရဲ့ခါးသိမ်သိမ်ကျစ်ကျစ်လေးကို သူ့ကိုယ်နဲ့ထိ အောင်စွဲကပ်ပစ်လိုက်တယ်၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာ မာ တောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမဆီးခုံကိုလာထောက်တော့ ကာမစိတ်တွေ ပိုပြီးထကြွလာတော့တာပေါ့၊
ကျမနုတ်ခမ်းကိုလည်း တယုတယနဲ့စုပ်ပေးရင်း လက်က ကျမရဲ့စွင့်ကားနေတဲ့ တင်သားတွေပေါ် အလိုက်သင့်ပွတ်ပေးနေသေး တယ်၊ နောက်တော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကို လက်နှစ်ဖက်ရှိူသွင်းပြီး တင်သားတွေအောက်ကနေပင့်ဆွဲလို့ ကျမဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲ လိုက် စုတ်ခြေလိုက်ပွတ်လိုက်နဲ့ တစ်ချက်တစ်ချက် အတွင်းခံပေါ်ကနေ သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမအဖုတ်ကို ပင့်ပင့်ထိုးနေလိုက်တာ ကျမ ဖြင့် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီး ပြီးလုပြီးချင်တောင် ဖြစ်ဖြစ်သွားမိတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ပြုစုယုယမှုတွေအောက်မှာ သူမတော်တော်ထန် နေပြီဆိုတာ ကျနော့်ခါးကို သူမလက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လာဖက်ထားတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်၊ သူမရဲ့ပုံစံ လေးက အသားဖွေးဖွေးနှာတံစင်းစင်းနဲ့ နုတ်ခမ်းလေးတွေကလည်း ဖောင်းအိအိလေးတွေ၊ စုပ်နေရင်းနဲ့ချိုချိုလာသလိုပဲ၊ မလွှတ် ချင်တော့လောက်အောင်ပါပဲလေ။ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ခါးလေးကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ တင်သားတွေနောက်ကို စွင့်ကားနေပြီး ပေါင်တံ လေးတွေကစင်းကျနေတော့ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ သူမအဖုတ်လေးကို စောင့်လိုးပစ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာ တော့ တယ်၊ ဒါနဲ့ သူမအဖုတ်လေးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကနေ နှိုက်လိုက်မိတယ်၊ Ooh… အရည်တွေရွှဲလို့ သူမဘယ်လောက် တောင် ခံချင်နေပြီလဲမသိဘူး၊ ကျနော်လည်း သူမ စောက်စိလေးကို လက်ခလယ်နဲ့ပွတ်ချေပေးလိုက်တယ်။ “အင့်ခနဲ” အသံထွက် လို့ ကျနော့်ကို မော့ကြည့်လာတယ်။
“ဆရာ..ဧည့်ခန်းကြီးထဲမှာ မကောင်းဘူး တော်ပြီကွာ” မောဟိုက်နေတဲ့ လေသံနဲ့ ကျနော့်ကို ဆက်မလုပ်ဖို့တားတယ်။ အရှိန် တက်နေပြီဆိုမှ လာတားတော့ နည်းနည်းဖီးလ်ပျက်သွားရတာပေါ့။ “ဟာ…ညီမကလဲ၊ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး၊ ဆရာ့စိတ်တွေမထိန်း နိုင်တော့ဘူး” “ဟင်..! မောင်လာလို့ရင် တွေ့သွားလိမ့်မယ်” “မလာသေးပါဘူးကွာ” နှစ်ယောက်စလုံး ဇာတ်ရှိန်မြင့်နေကြပြီဆိုပေ မယ့် ……… ဒီထက်ပိုဆက်လုပ်ဖို့ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျမ မဝံ့မရဲဖြစ်နေမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း ကျမစိတ်ကိုကျမ ၃မိနစ် ကြာအောင်တောင် မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ကျမစိတ်တွေ အရမ်းထန်နေပြီလေ။ ဆရာ့ကိုလည်း တားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိနေတော့ စိတ်ရဲ့စေရာအတိုင်း ကျမနဲ့မောင်နဲ့အိပ်တဲ့ အခန်းထဲ ခေါ်သွားလိုက်မိတော့တယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကျမ အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်ပစ်ပြီး ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှဲ ဒူးနှစ်ဖက်ထောင်ထားပေးလိုက်တယ်၊ ဆရာလည်းအဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်လို့လီးကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ကုတင်ပေါ်တက်လာတယ်၊ သူ့လီးဒစ်ကြီးက ပြဲလန်ပြီးကားနေတာပဲ၊ ဂွေးဥနှစ်လုံးကလည်း အမွှေးဗလပွနဲ့ မောင့်လီးလို ရှင်းပြီးလုံးချောမနေဘူး၊ လီးချောင်းကြီးကလည်း သံချောင်လိုမာတောင်နေပြီး အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ ဖုထစ်နေလိုက်တာ ကျမဖြင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကြက်သီး တွေတောင် ထလာမိတယ်။
ကုတင်ပေါ်ရောက်လာတော့ ကျမခြေရင်းမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်၊ နောက်ပြီး ကျမခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့လက်နှစ် ဖက်နဲ့ ဒူးကောက်ကွေးကနေကိုင်ပြီး ကျမနို့အုံ ဘေးထိ ဖိချလိုက်တော့ ကုတင်ကနေ ကျမရဲ့ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး မြောက်တက် သွားတယ်၊ ကျမဖင်နှစ်ခြမ်းကတော့ အစွမ်းကုန်စွင့်ကားပြီး ပြဲနေတော့တာပေါ့။ ဆရာက သူလိုချင်တဲ့ အနေအထားလည်းရောက် ရော စောက်ရည်တွေရွှဲပြီး ပြဲအာနေတဲ့ ကျမအဖုတ်အုံတစ်ခုလုံးကို ငုံ့ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲခနငုံထားလိုက်တယ်၊ ပြီးမှ ကျမအဖုတ်တ ပြင်လုံးကို လျှာပြားနဲ့လျှက်လိုက်၊ ဘေးနုတ်ခမ်းသားတွေ လျှက်ပေးလိုက်နဲ့ စောက်စိကိုလည်း ကျွတ်ထွက်မတက်စုပ်ပေးနေတော့ ကျမမှာ တအင်းအင်း ငြီးငြူလို့ ကျမဒူးကောက်ကွေးကို တွန်းဖိထားတဲ့ သူ့လက်ကို ရောင်ရမ်းပြီး ဆွဲထားလိုက်မိတယ်။ “အင်..အင်…အာ့..အာ..အာ ဆရာ. ဆရာရယ်…ညီမ အရမ်းကောင်းနေပြီ” “ညီမအပေါ် တက်လိုးပေးပါတော့နော်” “ညီမ အရမ်းခံချင်နေပြီလားဟင်” “ဟုတ်..၊ အရမ်းခံချင်နေပြီ၊ ဆရာ့လီးကြီးကို ညီမအဖုတ်ထဲသွင်းပေးပါတော့” “စိတ်ချပါ ညီမရယ်၊ အ ကြာကြီးသွင်းထားပေးမှာပါ” ဆရာကပြောပြောဆိုဆို အလိုက်သင့်ကားပေးထားတဲ့ ကျမအဖုတ်ထဲကို သူ့လီးကြီး ဒစ်မြုပ်ရုံလေး သွင်းပြီး ဆော့ပေးနေသေးတယ်၊ နောက်မှ အဆုံးထိမြုပ်အောင်သွင်းလို့ မစောင့်သေးဘဲ ကျမနို့တွေကို ကိုင်စုပ်ပေးနေလိုက်တယ်၊ ခနကြာတော့ နို့စုပ်တာရပ်ပြီး ကျမခါးကိုကိုင်လို့ တဖက်ဖက်နဲ့စောင့်လိုးတော့တာပဲ၊ စောက်ဖုတ်ထဲကို တင်းကြပ်ပြီးဝင်ဝင်လာတဲ့ သူ့လီးကြီးက ကျမသားအိမ်ကို လာလာထောက်နေတော့ ကောင်းကလည်းကောင်းနဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့ပြီး ခံနေမိတော့တယ်။
“အား…အားး အဟင့် အား……နာတယ်” “အား ကောင်းလိုက်တာညီမရယ်၊ ညီမအော်တဲ့အသံလေးက ဆရာ့လီးကိုပိုကြီးလာသလို ပဲ” “အင့်…အင့်..ရွှီးးးး အားးးး”ိ”ဖက် ဖက် ဖက် ဖက်” “အား..သေပါပြီ..၊ ဆရာရယ် ခံလို့လည်း အရမ်းကောင်းတာပဲရှင်” မောင့် သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ရဲ့ စောင့်လိုးချက်တွေအောက်မှာ ကျမ နာလို့အော်မိလိုက် ကောင်းလို့ညည်းမိလိုက်နဲ့ နာရီဝက်လောက်ကြာတဲ့ ထိ အောက်ကနေ ကားကားလေးခံနေမိတယ်၊ အပေါ်ကလိုးရတာညောင်းတော့ ကျမကို သူ့အပေါ်တက်ပြီး စောင့်ခိုင်းတယ်၊ ကျမ လည်း နှစ်ခါပြောစရာမလိုအောင်ဘဲ သူ့အပေါ်တက်ခွပြီး ကျမကိုယ်တိုင်သူ့လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ကျမအဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး ဖိချလိုက် တယ်၊ နောက်တော့ အပေါ်ကနေ စောင့်ပေးလိုက် ဇကောဝိုင်းပေးလိုက်နဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ညှောင့်ပေးနေမိပါတယ်။ “ညီမ လေးဘက်ထောက်ပေးတော့၊ ညီမရဲ့ဖင်ကြီးကို နောက်ကနေကြည့်ပြီး လိုးချင်လို့” “ဟုတ် ဆရာ၊ ဆရာသဘောရှိတဲ့တိုင်းလုပ်ဖို့ အကုန်ပေးထားပြီသားပါနော်” “ညီမက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ”
ကျမလည်း ဆရာရဲ့ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်လောက် အောင်ပဲ ကာမစိတ်တွေ မွှန်ထူနေပြီ၊ ဆရာ့လီးကြီးကိုလည်း အရမ်းစွဲနေမိပါပြီလေ၊ သူပြောတဲ့အတိုင်း ဒူးကလေးထောက်လို့ ဖင် ကိုအစွမ်းကုန် ကော့ထောင်ပေးလိုက်တယ်၊ ဆရာကနောက်ကနေ ကျမဖင်ကြီးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပြီးမှ ပြူထွက်နေတဲ့ ကျမ အဖုတ်ထဲကို အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေတဲ့ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ တဆုံးထိုးချလို့ ကျမပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဆွဲပြီး မီးကုန်ရမ်းကုန် စောင့်လိုးပြန်တော့တယ်၊ ကျမလည်း ဆရာရဲ့စောင့်ချက်တိုင်းကို ဖင်တရမ်းရမ်းနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူနေမိတယ်၊ ဆရာက နောက်ကလိုးနေရင်း ကျမတင်ပါးတွေရိုက်လို့ သူ့လီးကြီးကို ကျမဖင်နဲ့ပြန်ပြန်စောင့်ခိုင်းသေးတယ်၊ ကျမလည်း ရှေ့ကနေပြန်စောင့် ပေးလိုက် ဆရာကနောက်ကစောင့်လိုးလိုက်နဲ့ စည်းချက်ဝါးချက်ကိုညီလို့ ၁၅မိနစ်လောက်ကြာမှ ကျမအဖုတ်ထဲကို သူ့လရည်တွေ တဗျင်းဗျင်းနဲ့ ပန်းထုတ်နေလိုက်တာများ ကျမအဖုတ်ထဲကို ဆည်ကျိုးကျနေသလားမှတ်ရတယ် တစက်စက်နဲ့ ထုတ်လို့ကို မပြီးနိုင် တော့ပါဘူးရှင်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စိတျစစေားရာ